निर्दोष दाबी गर्दै आईरहेकी रिया चक्रवर्तीको भयो पर्दाफास, २० वर्ष जे’ल ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/निर्दोष दाबी गर्दै आईरहेकी रिया चक्रवर्तीको भयो पर्दाफास, २० वर्ष जे’ल !
निर्दोष दाबी गर्दै आईरहेकी रिया चक्रवर्तीको भयो पर्दाफास, २० वर्ष जे’ल !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधन के समा उनकै गर्लफेण्ड भनिएकी रिया चक्रवर्ती जे’ल जाने पक्का भएको छ । सुशान्तको ज्यान लिएको केसमा आफु निर्दोष भएको बयान दिंदै आएकी रिया चक्रवर्तीको विरुद्धमा एनसीबीले आफ्नो अनुसन्धानमा धेरै कुरा पाएको छ ।
सुशान्त सिंह राजपुत केसमा दिनप्रतिदिन नयाँनयाँ कुरा आईरहंदा सबैलाई अच्चमित पार्ने कुरा बाहीरिएको छ । मुख्य आ’रो’पी भनिएकी उनकै गर्लफ्रेण्ड रियाले सुशान्तलाई कसरी मा रि न् र सशान्तको ज्यान लिनुमा उनको संलग्नता कस्तो थियो भन्ने कुरा बाहीरिएको छ । यो कुरा अनुसन्धान गरिरहेको एनसीबीले पत्ता लगाएको हो ।
भारतीय मिडिया दैनिक भास्करको रिर्पोटमा एनसीबीका एडिजी अनिल सिंह भास्करको भनाईलाई कोड गरिएको छ । उक्त रिर्पोटमा एनसीबीका एडिजी अनिल सिंहले सुशान्तको ज्यान लिनुमा रियाको संलग्नता भएको बताएका छन् । उनले रियालाई यो के स मा प्रयोग गरिएको भन्ने कुरा अनुसन्धानमा देखिन आएको बताएका हुन् । साथै एडिजी सिंहले रियालाई सुशान्तको ज्यान मा र्नका लागी प्रयोग गरिएको हुनाले उनको भूमिका थोरै भएको पनि खुलासा गरे ।
जबदेखि एनसीबीका अधिकारीको यो भनाई बाहीरियो तबदेखि भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा यतिबेला खैलाबैला मच्चिएको छ । एक अधिकारीले नाम नभन्ने सर्तमा दिईएको बयानलाई पनि कोड गरिएको छ । ती अधिकारीको भनाई अनुसार रिया मात्र नभई उनको भाईसंगको च रे स सम्बन्धलाई पनि एनसीबीले पुर्ण रुपमा जाँच गरिसकेको छ ।
नक्कली प्रेमीका बनेर सुशान्तको जिन्दगीमा प्रवेश गर्नु र उनको ज्यान न मा र्दा सम्म उनीसंगै रहेर उनलाई पुर्णरुपमा आफ्नो बसमा राख्नु र अन्ततः सुशान्तको ज्यान मा र्न तयार गरिएको योजनालाई सफल बनाउनुका साथै सुशान्तको ज्यान लिनु पुर्व उनलाई ला’गु’ औ’ष’ध प्रयोगकर्ता बनाएर दुनियाँलाई झुक्याउनमा आफैले ला’गु’ औ’ष’धको कारोबार गर्ने अभियुक्तको रुपमा रियालाई २० वर्षको ‘जे’ल सजाय हुन सक्ने उक्त अधिकारीले बताए ।
काठमाडौंको यि कार्यालय आजदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म सबै बन्द ! (सूचनासहित)